Ingabe i-True Self ingaba ne-negative? - Mytika Speak
Ikhaya / Okwangempela / Ingabe i-True Self ingaba ne-negative?
Your Okwangempela ayithathi hlangothi futhi iyalinganisela.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi abantu nomphakathi bane-barometers ehlukene yalokho okuchaza amagama athi “positive” nokuthi “negative”. Isizathu ukuthi izinto eziningi zinomphumela omuhle noma omubi ngokuya ngomuntu, isimo, nezimo ezizungezile. Zonke lezi zinto ziyahlangana ukuze zithinte umbono.
Isibonelo, uClaire usepaki lokuzijabulisa nomngane wakhe omkhulu uJacqueline. Ngenkathi behamba phakathi kwesixuku sabantu, bayahlukana. UClaire unovalo lokuba yedwa kusukela esemncane futhi waduka ngenkathi ejaha iloli lika-ayisikhilimu. Lapho uClaire ekugcineni ebona uJacqueline, ugijimela kuye ekhuluma ngokwethuka. UJacqueline umtshela ukuthi kufanele akhululeke futhi abambe umoya. UClaire unekhono lokuthatha lokhu njengeseluleko esihle esivela kumngane omuhle. Ngenye indlela, angakhetha ukucasukela uJacqueline ngokunciphisa isimo.
Lapho i-True Self yakho iziveza, awukwazi ukulawula umbono wabanye. Kodwa-ke, njengoba kusho ukuthi akulimazi muntu, ungaqiniseka ukuthi uzohlala unesizathu esihle sokuphawula noma ukwenza kwakho.
Lapho ngicabanga ngombono woqobo weQiniso elingelona iqiniso, ngicabanga kuphela abantu ababonwa “njengezilo” emehlweni omphakathi. Ngiye ngizibuze kaningi ukuthi abantu abalimaza abanye ngamabomu babhekana kanjani nokwazi kwabo. Ngithola ukuthi lezi zinhlobo zobuntu kungenzeka zingazinaki noma ziphikisana ne-True Self yabo. Lokhu kungaba yingakho behlala nenxushunxushu yangaphakathi engaka futhi bekhetha ukugadla kwabanye. Abanye balaba bahlukumezi kungenzeka ukuthi babe yizisulu ezilahlekelwe ukuxhumana kwabo ne-True Self yabo ngemuva kokuhlangabezana nezehlakalo ezibuhlungu.
Amathegiibhalansi ukuqonda ukukhula komuntu siqu ingokomoya Okwangempela